१३ वर्षीय लेखक नेपाल एफएमको कार्यक्रममा | Ketaketi Online
Home » १३ वर्षीय लेखक नेपाल एफएमको कार्यक्रममा
posted by ketaketionline on Fri, 08/15/2014 - 00:41
उनीसँग नेपाल एफएमको कोपिला कार्यक्रमकी संचालिका दिदी सिर्जना खड्काले गर्नुभएको कुराकानीको छोटकरी रुप र केही तस्विरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । (तस्विरमा लेखक हिंमाशु, पत्रकार सिर्जना, आमा नीलम र केटाकेटी अनलाइनका प्रधान सम्पादक कार्तिकेय हुनुहुन्छ ।)
१. यो उपन्यास लेख्न कति समय लाग्यो ?
मैले दुई वर्षको समयमा यो उपन्यास लेखें । मलाई पढाइको एकदमै प्रेसर छ, त्यही भएर यसलाई राम्ररी सिध्याउन धेरै मिहिनेत गरें । सम्पादक महेश पौड्यालसँग पनि धेरै छलफल गरेँ । धेरै पटक भेटघाट र सम्पादनको काम पनि भयो । त्यसपछि बल्ल यो उपन्यास बजारमा आएको हो ।
२. लेखक भनेर अरुले भन्दा कस्तो लाग्छ ?
मलाई एकदमै खुसी लाग्छ । मेरो लक्ष्य असल र सफल लेखक बन्नु हो ।
३. दि आइजल्याण्ड एण्ड टाइम पकेट उपन्यास कुन विषयमा लेखिएको छ ?
यो उपन्यासमा मैले रोमान्चक कथा बुनेको छु । किशोर साथीहरुले मनपराउने विश्वास लिएको छु ।
====== आमा नीलमसँग तीन प्रश्न ======
१. हिंमाशुले लेख्न कहिलेदेखि सुरु गरेका हुन् ?
अमेरिकामा भानुजयन्तीको कार्यक्रममा ऊ मसँगै गएको थियो । पछि कविता भन्न उसको नाम आएन भनेर उसले मसँग झगडा गर्यो । त्यो बेला ऊ ६ वर्षको थियो । पछि माइकमा गएर जानेको कविता भन्यो पनि । यसरी मैले उसमा लेखनमा रुचि भएको देखेर यस क्षेत्रमा लाग्न सहयोग गरिरहेकी छु । ऊ एकदमै किताब पढ्छ । धेरै किताब किनिदिनु पर्छ ।
२. तपाईंलाई आफ्नो लेखक छोरा हिंमाशुको कुन बानी मनपर्दैन ? सुधार गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
मलाई उसको एउटै डायरीमा नलेख्ने र लेखेको कुरा च्यात्ने र फाल्ने बानी मनपर्दैन । म उसले लेखेका हरेक कुरा जतनसाथ राखोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।
३. अभिभावकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
हामीले आफ्ना छोराछोरी पेटभित्र छँदै यस्तो बनाउछु भनेर भन्न र सोही अनुसार सोच्नु र व्यवहार गर्नु गलत हो । उसको आनीबानी र रुचिको क्षेत्रमा उसलाई प्रेरित गरियो भने ऊ बढी सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तै, मेरो कान्छो छोरो सुँधासुलाई भिडियो मेकिङमा खुब रुचि छ । त्यो क्षेत्रमा नै उसको भविष्य राम्रो छ भन्ने हामीले सोचेका छौं । त्यसैले बालबालिकालाई दबाबमा होइन एकअर्काका कुरा सुन्दै र सुनाउँदै हुर्किने र असल मान्छे बन्ने वातावरण प्रदान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।